မြောက်ကိုရီးယားနှင့် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသားများအပေါ် ခရီးသွားလာခွင့် တားမြစ်ချက်များကို က?? - Yangon Media Group
၀ါရှင်တန် စက်တင်ဘာ ၂၅
အမေရိကန် သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်သည် တရားရုံးတွင် ဝေဖန်မှု၊ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော မူရင်းခရီးသွားလာခွင့် ပိတ်ပင်တားမြစ်ချက်များအတွင် အကျုံးဝင်သည့် နိုင်ငံများစာရင်းတွင် မြောက်ကိုရီးယား၊ ဗင်နီဇွဲလားနှင့် ချက်ဒ်နိုင်ငံတို့ကို ထည့်သွင်း လိုက်ပြီး ယင်းနိုင်ငံများမှ နိုင်ငံသားများအပေါ် ခရီးသွားလာခွင့် တားမြစ်ချက်အသစ်များကို တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ချမှတ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
သမ္မတက ထုတ်ပြန်လိုက်သော ကြေညာချက်အသစ်တွင် အကျုံးဝင်သည့်နိုင်ငံများစာရင်း၌ အီရန်၊ လစ်ဗျား၊ ဆီးရီးယား၊ ယီမင်နှင့် ဆိုမာလီယာတို့ပါဝင်နေဆဲဖြစ်သော်လည်း ဆူဒန်နိုင်ငံသားများအပေါ် ကန့်သတ်ချက်များကို ဖယ်ရှားလိုက်ပြီးဖြစ်သည်။ ယင်းကြေ ညာချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက် သမ္မတထရန့်က “အမေရိကန်ကို လုံခြုံအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်၊ လုံခြုံရေးအရ စိတ်မချနိုင်တဲ့သူတွေကို ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲကို ဝင်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး” ဟု တွစ်တာ တွင်ရေး သားခဲ့သည်။
အီရတ်နိုင်ငံသားများသည် ခရီးသွားလာခွင့်တားမြစ်ချက်များအတွင်း အကျုံးမဝင်သော်လည်း တိုးမြှင့် စီစစ်၊ စစ်ဆေးခြင်းတို့ကို ခံရမည်ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် မတ်လတွင်အာဏာတည်ခဲ့သော လက်ရှိ တားမြစ်ချက်သည် တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေတွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်အထိ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေမည့် တားမြစ်ချက် အသစ်များသည် ဒေါ်နယ်ထရန့်၏ ခရီးသွားလာခွင့် ပိတ်ပင်တားမြစ်ချက်သည် နိုင်ငံတကာမှ အမျက်ဒေါသနှင့် တရားရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးနောက်ပြန် လည်သုံးသပ်မှု ရလာဒ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ မူစလင်အများစုရှိသည့်နိုင်ငံစာရင်းတွင် မြောက်ကိုရီးယားနှင့် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသားများအပေါ် တားမြစ်ချက်များကို ထပ်တိုးထည့်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မြောက်ကိုရီးယားအရေးအပေါ် စိုးရိမ်မှုများ ရှိနေချိန် လျှပ်တပြက်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် ဂျပန်??
ပြန်လည် စွန့်လွှတ်မြေများကို မူလတောင်သူများထံ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲ မကွေး၌ကျင်းပ